Ọ bụ njikọ aka n'ezie? | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 3, 2019 Tọzdee, Ọktoba 3, 2019 Douglas Karr
Ọ bụrụ na mụ agwa enyi m nwanyị 83% karịa n’ọnwa a karịa ọnwa gara aga, abụ m itinye aka? Ọ́ bụrụkwanụ na m kwuru ole na ole banyere ya? Mụ na onye kwere nkwa ọlụlụ
Nkọwa nke njikọ aka doro anya:
(1) Nkwekorita nkwekọrịta iji lụọ di na nwunye.
(2) Ndokwa ime ihe ma ọ bụ ịga ebe ọ bụla n’oge a kara aka.
Nkọwa nke njikọ aka Merriam Webster
N'ime afọ iri gara agaM bupụtara nke a na m chọrọ ka ndị ahịa kwụsị ikwupụta okwu a njikọ aka dị ka ọnụọgụ azụmahịa. Taa, ọ ka bụ esemokwu na ụlọ ọrụ anyị ka m wee soro ya n'okpuru vidiyo.
Oge tụrụ na ibe, ọnụ ọgụgụ nke kwuru, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ, ọnụ ọgụgụ votu, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke vidio a na-ele anaghị enyere azụmahịa gị aka ọ gwụla ma ị nwere ike ịhazigharị ya njikọ aka ka n'ezie nsonaazụ azụmahịa. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, ọ bụ naanị a ihe efu metric.
Aka m na-eme mkpesa banyere mmekpa ahụ nke okwu ahụ njikọ aka taa n'ihi na m na-ahụ ka ọtụtụ ndị ahịa na-emefu nnukwu ego na ọdịnaya nke anaghị enye uru azụmaahịa ọ bụla.
Ọ bụghị njikọ aka, ọ bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Nke ahụ apụtaghị na ndị na-ere ahịa ekwesịghị ịchụso ụfọdụ ụdị mmekọrịta dị n'etiti ndị na-ekiri, ndị na-eso ụzọ, ndị na-ege ntị, ndị na-ege ntị, wdg. Mana ndị ahịa gha aghazie imekọrịta mmekọrịta ahụ na nsonaazụ azụmaahịa n'ezie.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị bụ ọrụ mmekọrịta ọ bụla nke mmadụ abụọ na-eme, ebumnuche nke onye ọ bụla na-enyocha ịdị mma nke onye ọzọ dị ka onye ọlụlụ.
Ọ bụrụ na ndị ọbịa gị na-etinyekwu oge na saịtị gị, ekele! Na-akpakọrịta karịa na ọ bụ ezigbo ihe ịrịba ama… ma ọ bụghị njikọ aka. Mgbe ọbịbịa gị zụtara mgbaaka ahụ ma tinye ya na mkpịsị aka gị, gwa m na ị na-agba akwụkwọ. Mgbe ọnụọgụ ndị ọbịa ahụ na-abawanye ma ha na-azụkwu ihe na weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịgwa m na njikọ gị na-aba ụba.
Ahịa ndị na-enweghị ike chọpụta nloghachi na itinye ego na mgbasa ozi mmekọrịta were okwu dị ka njikọ aka legitimize mgbalị ha ma na-asị ha ahịa… mgbe imefusị ego ha.
Mgbe Jeffrey Glueck mere okwu mmeghe na eMarketing Association Conference afọ iri gara aga, ọ gwara nnukwu akụkọ banyere Travelocity ịmalite mgbasa ozi mgbasa ozi na-eji gnome na Myspace.
Site na itinye aka, ụkpụrụ ahụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma… onye ọ bụla nwere obi ụtọ na mkparịta ụka na mkparịta ụka na mkparịta ụka gafere! Ndị mmadụ tinyere oge ka ukwuu na ibe ahụ ma enwere ọtụtụ ngosi. Agbanyeghị, agbanyeghị, mkpọsa ahụ furu $ 300k ma ọ bụ ọdịda na ịkwọ ụgbọala azụmaahịa gaa na Travelocity. Ndị ọzọ okwu ... enweghị njikọ.
PS: N'akụkụ dị n'akụkụ… Enwere m enyi nwanyị mana anyị anaghị agba mbọ.
PPS: Ekele dịrị Ablog sinima maka imepụta vidiyo a dị egwu! Nke a bụ nke abụọ n’ime anyị Echiche gha, Nghahie, na antsgha usoro.
Ezigbo Onyenwe Anyị… M banyere dara n'oche m n'ọfịs mgbe m gụsịrị aha a post. Okporo ụzọ adịghị mkpa na ogologo oge .. ahịa bụ ihe guru .. Ego. Ego ha ga enweta. Ego ha ga enweta.
Kẹle mu byaru Stephen. Ọ bụ nnukwu nwoke ma enwere m obi ụtọ na ọ sonyeere unu… Echere m na ọ ga-eju gị anya etu o si egwu ala wee gụpụta ihe.
Re: nke a. Echere m na iwulite mmekọrịta gị na ndị ahịa gị na ndị ahịa dị oke mkpa - yana ụfọdụ ihe siri ike ịlele. Otu n'ime ihe mere m ji enwe mmasị n'ịde blọgụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ na enwere m ike ịkọwapụta, enwere m ike ikwu eziokwu, enwere m ike ịlebara ndị ahịa m anya nke ukwuu - mana nke kachasị - AMA M na ihe niile ahụ siri ike iji tụọ tupu enwee ike ịkọwa ugbu a.
Naanị m chọrọ ịma ndị ahịa aka ka ha nye ndị ahịa ha olulu a na-ahụ anya nke na-enye ha ihe akaebe na-eduga na b, b ka c, na c d. Mgbe ndị ahịa chepụtara na imeghe, ime ihe n'eziokwu na ịdị available ha ga-aka mma maka ya! Anyị kwesịrị igosi na ọ bụ maka ha.
Ọ dị mma ịhụ gị ebe a! Kedu mgbe ị ga-abịa Bọọlụ Bean?
Ikekwe anyị ga-abanye n'arụmụka ntụgharị asụsụ ebe a, mana echere m na ọ bara uru inwe.
A. O yiri ka njikọ aka ọ bụ ihe omume dịịrị na ntụnyere gị (ma ọ bụ opekata mpe ihe omume nke kpatara naanị site na ịzụrụ). M ga - arụ ụka na nkọwa ọzọ maka itinye aka bụ "ịbịanye ma ọ bụ tinye" mmadụ n'otu mkparịta ụka ma ọ bụ mmekọrịta. Njikọ aka abụghị ihe dị egwu ma ọ bụ ọbụna ihe omume dị egwu. Ọ bụ obere mmekọrịta dị na mmekọrịta dị mma n’etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa. Ọ na-ebelata ohere dị n’etiti ha.
B. Enwere ike ịgụta mkpụrụ okwu "njikọ aka" ndị a edepụtara nke ọ bụla, ana m akọwakwa ha dị ka njikọ aka. Ebe m na-ekwenye na obi abụọ gị bụ mgbe a gụpụtara ngosipụta nke ọ bụla maka onwe ha. Naanị n'ihi na mmadụ hapụ ikwu okwu apụtaghị na ha nọ nso ịme ihe azụmahịa akọwapụtara dịka ịzụrụ. Omume itinye aka kwesịrị iwulite nsonaazụ njedebe nke azụmaahịa chọrọ. Ahịa ahịa ga-emerịrị ụzọ a (mgbe mgbe na-abụghị usoro). Dịka ọmụmaatụ, ebe Travelocity dara naanị na -emepụta mkpọsa mmata dị jụụ n'echeghị etu ndị ahịa ọ bụla ga-esi mee ka mmadụ mezue ihe mgbaru ọsọ.
C. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na ntụnyere gị… Echeghị m na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-enweta mgbanaka n'aka ndị ahịa ha. Ndị ụlọ ọrụ ga-enwerịrị onye ahịa ha mgbe niile, soro ha, soro ha nwee mmekọrịta ọhụụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-eche na ha emechaala ndị ahịa ha n'okporo ụzọ na alụm di na nwunye, ọ ga-eju ha anya etu ịgba alụkwaghịm si dị na foto ha.
Ndoo maka okwu a ogologo oge, mana ekwenyere m na itinye aka bụ ihe dị mkpa maka ahịa yana enwere ike iwulite ya nke ọma. Naanị echiche dị iche.
Nnukwu nzaghachi na mkparịta ụka dị mma. N'ime nzaghachi gị, aga m agbagha echiche ahụ na nke ọ bụla n'ime ihe omume ndị a 'ga-eduga' na mmekọrịta mmekọrịta ego. Gosi m otu olulu ahia nke ulo oru ndi n’enye ihe n’egosi na uzo mbu eji eme ka ndi mmadu zuta n’aka ahia gi bidoro mgbe ha na ekwu okwu na blog gi blog ma obu na enwere nmekorita n’etiti onu ogugu ndi n’eso uzo gi na ahia gi.
Echere m na nkụda mmụọ m dị na eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ kwenyere na nke a na-aghọ ụdị ngosipụta aghụghọ nke azụmaahịa. Dịka onye na-ere ahịa, achọrọ m ịnye NGW and na data nyocha nke na-egosi ihe kpatara na mmetụta mmekọrịta dị n'etiti ihe ndị a na ezigbo ịzụta. Ruo ugbu a, echere m na ọ bụ bs
Jiri nkwanye ugwu dị ukwuu!
Doug, nke a bụ ihe atụ dị ukwuu, ma ekwere m na 'njikọ aka' adịkwaghị nká. Ndị na-ere ahịa n’ikpeazụ kwesịrị ilekwasị anya n’ihe na-akpali azụmahịa ma na-ewetara ndị mmadụ ezigbo ihe banyere ịhapụ ego ha maka ngwaahịa na ọrụ gị. Michael